UTruter uzoyakha kabusha iSwallows ezoshiywa ngabadlali abamqoka - Impempe
UTruter uzoyakha kabusha iSwallows ezoshiywa ngabadlali abamqoka
Kusale kancane abaqagule ngamagama abadlali abazoshiya kwiSwallows njengoba kuphela isizini umqeqeshi waleli qembu, uBrandon Truter. Ukuvumile ukuthi kunabadlali abayisithupha abebeyinsika yeqembu lakhe kule sizini abazohamba.
Kuvele kunamahebezi athi oRuzaigh Gamildien, Kgaugelo Sekgota, Njabulo Ngcobo, Sifiso Hlanti noGiven Thibedi bazojoyina iChiefs ngesizini ezayo. UNgcobo kungenzeka nokho aye kwiMamelodi Sundowns kanti ne-Orlando Pirates iyamhalela uSekgota.
UTruter ukuvezile ukuthi kunabadlali abazohamba ngakho kuzomele alibumbe kabusha futhi iqembu. “Beyinzima kakhulu,” kusho uTruter ngale sizini. “Kwenziwe amaphutha. Sibe nezikhathi ezinhle, nezikhathi ezimbi.
“Kodwa okubalulekile wukuthi sidlulile kukho konke. Ngijabule ngendlela abadlali abazinikele ngayo. Sifunde lukhulu kule sizini yethu yokuqala kwiDStv Premiership.
“Sifundile singabaqeqeshi kanti nabadlali abancane abanikwe ithuba bafundile. Saqala kahle sindiza, kodwa kuye kwaya amaqembu asibamba ukuthi siwashaya kanjani kwase kuba nzima. Abe esesebenzisa ubuthaka bethu,” kusho lo mqeqeshi oneminyaka engu-44.
“Kumele sisayine kahle, bese namaqhinga ethu siwenze abe ngcono. Emuva singenelwe amagoli amanye wawo abengafanele asidle. Uma siya phambili besiwakha amathuba kodwa kumele sikuphucule lokhu.
“Sengivele ngikulungele ukuqala amalungiselelo esizini entsha ngoba izosheshe iqale. Kuzoba nzima ngoba sizolahlekelwa abadlali abayisithupha abebeyinsika yeqembu.
“Ngakho sizoqala kabusha kodwa lokho kuyangichaza mina ngoba kuyinselelo. Ngijabule, ngizizwa ngithobekile… Ngiyaziqhenya ngabadlali nethimba labaqeqeshi,” kusho uTruter.
Previous Previous post: Uyishwebe kancane indondo yamagoli uShalulile oshaye amabili emdlalweni wokugcina
Next Next post: ISundowns ibongelwe nangumengameli weFIFA ngokudla isicoco seligi